DARAASAD: In Miisaanka Jirkaaga Uu Ka Dhaco Waxay Ku Xirantahay Halkaan Arrin - iftineducation.com
DARAASAD: In Miisaanka Jirkaaga Uu Ka Dhaco Waxay Ku Xirantahay Halkaan Arrin
iftineducation.com – Tayada cuntada ee aad quudato ayaa waxay saamayn weyn ku yeelan kartaa in aad iska rido miisaanka jidhkaaga, haddii ay dhibaato kaa haysato misaanka jidhkaaga oo kugu cuslaaday.
Waxaanay cuntadu saamaynta ugu weyn ku yeelataa dhaqdhaqaaqa jidhka iyo inta qofku uu hurdo, taas oo dhibaato uu kala kulmi karo haddii uu cunto xaddi badan qaado, isla markaana nafaqadeedu aad u badan tahay.
Cuntada nafaqada leh oo kaliya maaha ta keenta buurnida xad-dhaafka ah, balse cuntada karbohaydarayka ahiba waxa laga kulmaa buurni xad-dhaaf,waxaanay dhakhaatiir samaysay daraasad una leh khibrad nafaqada cuntada sheegen in cuntooyinka ay ka mid yihiin roodhida cad, bariiska cad iyo ku quraacashada cuntada ay faytamiinadu ku badan yihiin ay keento buurni xad-dhaaf ah.
Waxa ay dhakhaatiirtu soo jeediyeen in cunista khudaarta kala nooca ah ee bisil iyo kuwa la kariyaaba, lawska iyo wixii la mid ah iyagu ka hortagaan buurnida iyo miisaanka xoogga ah.
Prof. Frank Hu oo ah khabiir cilmiga nafaqada ku takhasusay oo waxna ka dhiga kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Harvard ee dalka Maraykanka oo ah jaamacadaha adduunka ugu qaalisay, ayaa sheegay in daraasadoodan ay uga gol leeyihiin ay dadka tusaan in cuntada loo cuno si caqli ku dheehan yahay, taas oo uu soo jeediyey in cuntada si dheeli tiran loo cuno.
Daraasaddan oo uu qurbo magazine soo turjumay isla markaana lagu daabacay wargeyska ka soo baxa Ingiriiska ee caafimaadka ee New England Journal, ayaa tustay dadweynaha qaadashada cuntada xaddiga ugu habboon in ay dadka ka caawiso in uu caafimaad iyo hurdo fiican helo.
Hogaamiya Alshabaab oo soo diray Fariin ka duwan Fariimahii Abuu Zubeer Dhageyso
Brad Pitt Oo Ka Hadlay Arrin Ayaantaan La Isla Dhex Marayay